चितवन जिल्लाको दक्षिण भुभागमा रहेको राप्ती खोला पारी एक दुर्गम गाउँ थियो । जुन दुर्गम गाउँको नाउँ हो पदमपुर । जहाँ हरेक वर्षको वर्षाको याममा राप्ती खोलाले अन्न उब्जाउने खेत लैजान्थ्यो । बाढीले उब्जिएको अन्न पनि सखाप पाथ्र्यो । अर्कोतिर वनजंगलको छेउमै रहेको उक्त गाउँमा जंगली हात्ती, बाघ, भालु र गैंडाको आक्रमण ज्यादै थियो ।
राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर चर्चामा आएका पात्र हुन् कुलमान घिसिङ । आम सर्वसाधरण यतिबेला कुलमान घिसिङप्रति कृतज्ञ छन् । उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा गत भदौ अन्तिममा नियुक्त भएका थिए । प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिनामै उनले जादुमय तरिकाले राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त बनाइदिएका छन् । लोडसेडिङ अन्त्यको नारा लगाएर विगतमा राजनीतिक दलका धेरै नेताले चुनाव जिते, कति सरकार
स्वर्गीय डा. हरिहर देव पन्त नेपालमा लघुवित्तका पिता मानिन्छन् । मौद्रिक अर्थशास्त्री, निर्धन उत्थान बैंकका संस्थापक, कार्यकारी संचालक डा. पन्त नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर समेत थिए । ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न गरीब घरपरिवारहरुमा लघुवित्त कार्यक्रममार्फत आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक विकास गराउन तीन दशकभन्दा बढी समय उनले योगादान गरे । वित्तीय कार्यक्रम विस्तारमा भूमिका स्वर्गिय डा.
कृषि विकास बैंक नेपाली कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको सरकारी स्वामित्वको बैंक हो । यो बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंक हो । कृषि विकास बैंकले अन्य क्षेत्रभन्दा कृषिमा बढी लगानी गरेर मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । स्थापनाको समयमा जम्मा ५ करोडको अधिकृत पुँजीबाट कारोबार भएको बैंकले आज
नेपाल राष्ट बैंकको इतिहासमा सधैँ स्मरणमा आइरहने नाम हो, हिमालय शम्सेर जबरा । उनी वि.स २०१३ साल बैशाख १४ गते नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको राष्ट बैंकका प्रथम गभर्नर हुन् । सफलताका लागि संघर्ष र संघर्षका लागि लगाव, धैर्यता र निरन्तरताको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा उनले आफ्नो
हाँस्य कलाकार शिवहरि पौडेल सबैका चिरपरिचित पात्र हुन् । २०२३ सालमा मकवानपुरमा जन्मिएका उनी हाल कलाकारितामा राम्रोसंग जमेका छन् । आम दर्शक र श्रोताहरुले असाध्यै रुचाएका शिवहरि कुनै समय बैंकका कर्मचारी थिए । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, शिवहरि नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कर्मचारी हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० बर्षको कार्यकाल बिताएर उनले गत वर्षमात्र अवकास प्राप्त